China Korea-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Serivisy serivisy>Faritra atsimo atsinanana>Shina mankany Korea
Fandefasana entana avy any Shina mankany Korea
Raha mitady mpandeha lavitra azo itokisana ianao hanampy ny fandefasana anao avy any Chine ka hatrany Korea, dia eo amin'ny toerana mety ianao.
Na ny serivisy fandefasana entana avy any Chine mankany Korea aza dia matotra ankehitriny, ny SHL dia afaka manandrana hatrany amin'ny fanaovan-tsonia ny tsara kokoa, ankoatra ny vahaolana tsara sy ny serivisy tsara, afaka manome salan'isa mifaninana ihany koa isika avy any Chine ka hatrany Korea.
SHL dia hanampy anao hisafidy ny làlana fandefasana tsara indrindra, vidin'ny fandefasana fifaninanana sy ny orinasa fandefasana tsara indrindra hanampiana ny fanafarana any Shina mankany Korea.
Fitaterana làlana eropeanina any China ka hatrany Korea
China Railway Express avy any Chine ka hatrany Korea
Ny SHL dia manome serivisy lalamby maharitra eo anelanelan'i Chine sy Korea ho an'ny entana entana entana ho an'ny FCL sy LCL, logiciel tokana One Belt ary One Road ho an'ny vahaolana haondrana entana aondrana sy manondrana ary afaka mamaha ny olana momba ny famafana ny fomba amam-panao any Sina.
Fitaterana entana mavesatra amin'ny entana avy any Chine ka hatrany Korea
Ny SHL dia afaka manome ho an'ny Cover Truck raha misy ny Open Open Wagon ho an'ny mpivarotra Flatbed Truck ho an'ny fitaovana, fitaovana fametahana, fiara ary fitaovana mavesatra avy any Shina mankany korea Afaka manolotra vahaolana iray mijanona sy namboarina izahay.
Fandefasana entana Ro-Ro / Break entana avy any Chine ka hatrany Korea
Ny SHL dia afaka manome RORO ROROMAFI BREAKBULK ho an'ny fitaovana famepetra, fiara ary fitaovana mavesatra avy any Chine ka hatrany Korea Afaka manolotra vahaolana iray mijanona sy namboarina.
Fandefasana entana an-dranomasina avy any Chine ka hatrany Korea
Ny SHL dia manana kojakoja tsara amin'ny fandefasana entana avy any Chine ka hatrany Felixstowe, Southampton, sns. Mba hahafahantsika mahazo hatrany ny seranan-tsambo lehibe mankany amin'ny seranan-tsambo any Korea, ary azontsika antoka ny toerana fitahirizana na dia amin'ny vanim-potoana faran'andro aza.
Fandefasana entana an'habakabaka avy any Shina mankany Korea
Betsaka ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena mahazatra any Korea ary misy ihany koa ny entana fandefasana entana avy any Chine ka mankany Korea amin'ny alàlan'ny rivotra, ny SHL dia afaka manome fantsom-pifandraisana mahomby izay ambany noho ny tsena amin'ny mpanjifantsika mifototra amin'ny fandaharam-pivarotanao.
Manodidina ny 7,775 XNUMX km tsy lavitra an'i Korea i Shina, saingy mety haharitra ela kokoa noho ny làlan-dranomasina voafaritry ny vatan-dranomasina i Shina.
Alohan'ny hisafidianana io fomba fandefasana io dia tsy maintsy mahafantatra tsara ny seranana samihafa any Sina sy Korea izy.
Seranam-piaramanidina lehibe any Korea
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena incheon Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Jeju
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Gimhae Sidina fiaramanidina Gimpo
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Yangyang Seranam-piaramanidina Daegu
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Cheongju Seranam-piaramanidina Sacheon Air Base
Seranam-piaramanidina Ulsan Seranam-piaramanidina Air Kunsan
Seranam-piaramanidina Jeon Ju Seranam-piaramanidina Gwangju
Seranam-piaramanidina Jinhae Seranam-piaramanidina Seosan Air
Seranam-piaramanidina Pohang Seranam-piaramanidina Wonju
Seranam-piaramanidina Gangneung Seranam-piaramanidina Uljin
Seranam-piaramanidina C 503
Seranam-piaramanidina C 504
Seranam-piaramanidina Chuja Heliport Seranam-piaramanidina C 424
N 203 Seranam-piaramanidina Helipad Seranam-piaramanidina C 107
Seranam-piaramanidina Yeosu Seranam-piaramanidina fiaramanidina Jukbyeon vonjy maika
Modely fandefasana entana avy any Chine ka hatrany Korea
Isaky ny manondrana any Sina ianao ka any Korea, dia afaka misafidy mode maro fandefasana entana ianao.
Seranan-tsambo inona no tokony ampiasaiko halefa any Chine ka hatrany Korea?
Satria mila seranana afaka mampifandray anao mivantana any Korea ianao
Isaky ny inona ny fotoana voatokana handefasana entana avy any Chine ka mankany Korea?
Raha fintinina dia azonao atao ny mandray anjara amin'ireto rehetra ireto mba hahazoana ny fotoana mety hahitana azy io
Ireo mpandeha ho an'ny fifamoivoizana toy izany dia mahalala ny fitsipi-pitondrana sy fitsipika mifehy ny fanafarana avy any Shina mankany Korea